सुपर हीरा डिलक्स | Coinfalls क्यासिनो
सुपर हीरा डिलक्स निरपेक्ष लक्जरी तपाईं सम्झना दिलाउँछ! यो तपाईं धेरै पेआउट भेटी स्पार्कलिंग रत्न amidst हुन कस्तो छ तपाईंलाई महसुस. त्यहाँ कुनै wilds वा स्क्याटर प्रतीक हो भन्ने स्लट को सुन्दरता तथ्यलाई मा निहित. त्यसैले, तपाईं ती संयोजन लागि लक्ष्य आवश्यक3वा 4, जितको तिर तपाईं ड्राइव. आवश्यकता सबै भाग्य को एक बिट को को राजा हुन छ सुपर हीरा डिलक्स स्लट रील.
Igt वा अन्तर्राष्ट्रिय गेमिङ प्रौद्योगिकी प्रदान कम्पनी देखि एक क्यासिनो खेल सफ्टवेयर छ 2006 Gtech निगम को नाम मा Gtech Lottomatica मा प्राप्त गर्दा 2006. कहिल्यै तब देखि, कम्पनी को क्यासिनो प्रेमीहरूले mesmerizing हरेक अब र फेरि अद्भुत स्लट खेल गरिरहेको छ. हालै, मा 2015, यो अमेरिकी कम्पनी igt प्राप्त गर्दा कम्पनी यसको नाम प्राप्त र यसको नाम लियो.
सुपर हीरा डिलक्स एक सरल स्लट खेल हो. को प्रतीक माणिक छन् रूपमा विषय बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धित छ, jades र सुन्दर cutwork हीरे. त्यसैले रील पत्थर यो भन्दा बढी Brightly चमक संग गहिरो रातो पृष्ठभूमि संग सुरुचिपूर्ण हेर्न. यो स्लट संग खेलिन्छ5रील र 10 paylines र यो एक जीत लाइन मात्र पहिलो रील सुरु गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक छैन. अलग रंगीन रत्न बाट, 10, जे, Q, K, र एक कम तिर्ने प्रतीक हो. तपाईं लागि पेआउट खेल्छ कि यो स्लट मा कुनै wilds वा छरिन्छ छन्. मुख्य बोनस खेलको प्रगतिशील Jackpot सुविधा छ. साथै, को प्रतीक रील मा स्ट्याक प्राप्त, यो स्लट मा ठूलो जीत बनाउन सम्भव छ. क्रमिक Jackpot सुविधा मा, त्यहाँ कुनै निश्चित विजेता आवश्यक संयोजन गर्दै छन्. तपाईं बस तपाईं spins गर्दा अनियमित हुन्छ जो सुन गर्न रील बारी गर्न आवश्यक. यो स्लट बारेमा गर्न भुक्तानी प्रदान गर्दछ रूपमा खेलाडी प्रतिशतमा फिर्ती धेरै राम्रो छ 96.43% समयको . यो सट्टेबाजी दायरा £ 0.20 देखि सुरु र £ 500 सम्म जान्छ. को volatility देख, the game offers somewhere between low to medium volatility, तर, कारण प्रगतिशील jackpots गर्न, उच्च जोखिम भोक मानिसहरूलाई पनि आफ्नो तिर्खा मेट्न सक्नुहुन्छ.
पृष्ठभूमि र ध्वनि सभ्य भएको र राम्रो विषय संग पङ्क्तिबद्ध छ सुपर हीरा डिलक्स. Igt यो विषय निकै सम्बन्धित विभिन्न अन्य स्लट छ, तर यो स्लट gameplay को सादगी र enjoyability देख विभिन्न खडा. त्यसैले, बस रमाइलो समय पक्कै यो स्लट लागि जानु पर्छ गर्न चाहने मान्छे.